20 ဖေဖော်ဝါရီ 2018
20 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 အိုလီဗာ Bienkowski
Freimaurer-retten.de - ထွက် လာ. လူဦးကယ်တင်! ဆေးရုံသင်္ဘော
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 20 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2018
ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲလူအားလုံးကိုကူညီဒါကြောင့် Making ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင် ထက်အခြားအဘယ်သူအားမျှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းညီအစ်မတွေနဲ့ & ညီအစ်ကိုများ တစ်ကွင်းဆက် လူသား၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအတွက် သဘာဝဘေးဒေသများနှင့်စစ် သွားလာခြင်း။ ကြေးဇူးပွုပွီး ဆောင်ရွက်ရန်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှစာသားကျော် ပေမယ့ zu ထောက်ပံ့.
စတင်ရန်, ငါတို့မြေယာတဦးတည်းအပေါ် operate စည်သွတ်မုန့်ကိတ်မုန့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၏အမှု၌ပျက်စီးအစားအစာများဖြန့်ဝေရန်။ ရေတွင်ကျွန်တော်ငါတို့ကဲ့သို့တစ်လှေကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစား ဆေးရုံသင်္ဘော အသုံးပြုချင်။
မြို့ရိုးကိုစက်ဝိုင်းနှင့်အတူစည်သွတ်မုန့်ကိတ်မုန့်။ အကြီးဆုံးသစ်သားပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့မီးဖိုမြောက်အာဖရိက၏5မီတာအကျယ်နှင့်အတူ
ငါတို့သည်လည်းချင် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ ရန်ပွဲ။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံထင် ကျွန်တော်တို့ကို Freemasons ၏မထိုက်တန်ဤစုစုပေါင်းထပ်တလဲလဲပူးပေါင်းကြံစည်မှုတုံ့ပြန်ရန်မဟုတ်, အရှင်အင်တာနက်ကိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စရိတ်မှာလုပ် အယောင်ဆောင်ပြီး Lodge အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနှင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မွတ်စ်လင် 60 နှစျကျြော Freemasonry ၏မိစ္ဆာ image ကိုဟစ်တလာရှိသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ချင် ပြည်သူ့သတင်းအချက်အလက်အစည်းအဝေးများ ကျနော်တို့တက်ကြွစွာကူညီဘယ်မှာကတည်းကရှင်းလင်း။ အဆိုပါ အသင်းတော်များ Freemasonry ရပ်တန့်ရမယ် အပြစ် တင်., ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသိအမြင်အစီအစဉ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်ပမှာမစ်ရှင် နိုင်ငံသားများ အလင်း အပေါ် Freemasonry ၏နောက်ခံသမိုင်း.
တစ်ဦးကမော်ရိုကိုငါးဖမ်းလှေစစ်ပွဲဒေသများတွင်နှင့်လူတက်ကြွဖြစ်မယ့်ဆေးရုံသင်္ဘောသို့ကူးပြောင်းခံရဖို့ဖြစ်တယ် မသက်ဆိုင်ဘဲမူလဇာစ်မြစ်သို့မဟုတ်ဘာသာရေး ကူညီဖို့ရန်။
အဆိုပါစျေးအသက်သာဆုံး high-ပင်လယ်ငါးဖမ်းလှေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စုဆောင်းမည်မျှအလှူငွေများပေါ် မူတည်. ဒါမှမဟုတ်ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေအကြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲကတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံသည်ဖြစ်စေ, ကလည်းဖြစ်နိုင်သည် ပိုကြီးတဲ့ငါးဖမ်းလှေ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ငယ်တစ်ခုအဖြစ်လှေချင် ဆေးရုံသင်္ဘော ညီအစ်ကိုတွေက & အစ်မတွေဆင်ခြေဖုံးနှင့်အတူအသုံးချရန် အခမဲ့ခွဲစိတ်စစ်ဆင်ရေး နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသ စစ်ပွဲနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဒေသများရှိလုပ်ဖို့။ ပင် တစ်ခုတည်းသော Operating အခန်းထဲမှာ & တစ်ဦး သွားဘက်ဆိုင်ရာ Stuhဌမဆိုအရေအတွက်က ဘဝတွေကိုကယ်တင်, ကျနော်တို့သတိရ Oskar Schindler အဘယ်သူသည်ပြီးသား "ဟုပြောသည်အကြင်သူသည်တဦးတည်းဘဝကိုကယ်တင် "လောကဓာတ်လုံးကိုကယ်တင်တော်မူ၏.
ပညတ်တော် Fourcault ကောင်းတစ်ဦးဆေးရုံသင်္ဘောလိမ့်မယ်ချက်ချင်းယီမင်၌စစ်အသုံးပြုကြသည်နိုင်ဘူး။
လောလောဆယျလက်ရှိတပ်မှူးချုပ် Fourcault အဆိုပါ Antwerp တည်ရှိသောနှစ်ခုထက်ပိုသောသင်္ဘောများအဘို့နှစ်ခုမကြာသေးမီအပေးအယူဟာကုံ & Dignitus, Cadiz အတွက်အဟောင်းအသက်ကယ်လှေအရေးပေါ်မြေထဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးလှေဟောင်းငါးဖမ်းလှေထက်ပိုစျေးကြီး 1.800.000 €တပ်ဆင်ထားကြသည်။ Freemasonry အတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်အလွယ်တကူ Freemasons လောကီသားတို့သည်ကွင်းဆက်အတွင်းပင်သူတို့အားကုန်ကျစရိတ်သယ်ဆောင်နိုင်သူညီအစ်ကို, ညီအစ်မဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီငါတို့သည်ဤလောက & ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြေရှင်းရန်အရေးယူမှညီအစ်ကို, ညီအစ်မစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ရှိသည်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ကညီအကိုများ၏အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ သာသင့်ရဲ့အကူအညီဖြင့်ကျနော်တို့အသက်ရှင်လျက်စီမံကိန်းတဝိုက်အလုံအလောက်ထောက်ခံသူများကိုလယ်စောင့်ရှောက်ရန်သင့်စကားဝိုင်းများလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အဆိုပါကုံဒုက္ခဆင်းရဲကနေလုနီးပါး 30.000 ကလူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့် Cadiz ယခုဖြစ်ပါတယ်
၏သင်တန်း, ဒီအစီအစဉ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်များတွင်စတင်ခြင်းမရှိပါ, ထို Mason ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အလုပ်လုပ်အေဂျင်စီမှ resolution ကိုအဘို့အတတ်ကြောင်း Pixel ကူညီ Foundation မှအကျိုးအမြတ်ကုမ္ပဏီ၏တည်ထောင်သူ, အဖွဲ့အစည်းအဘို့အ 2015 စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဒါကြောင့်သူသေဆုံးတခြားညီအစ်ကိုတွေပြီးနောက်အာဖရိကအတွက်မစ်ရှင်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အဦများတိုးချဲ့ "Freemasons ကယ်တင်" ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သစ်တစ်ခုငှားရမ်းဇူလိုင်လ 2019 အတွက်မော်ရိုကိုအတွက် site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအာမခံ3နှစ်အတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါမှသာပြည်မှဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းတိုးချဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Mason ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်၏အစ်ကို & တည်ထောင်သူအဆိုပါ Mason အနုပညာရှင် Otmar Alt & Snoopy
ယခုမှာအကြှနျုပျ၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မ: "ဤလောကသို့ သွား. တစ် Freemason အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြ" - ဒီတောက်ပ set ကိုကျနော်တို့ Freemasonry အပေါငျးတို့သအမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အပြောအဆိုဖယ်ရှားပစ်လျှင်ပင်လက်ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာကျနော်တို့တိုင်းတာကြသည်နှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်: အမှန်ပင်မှာ!
အသင်္ချေ၏စတီယာရင်ဘီးထဲမှာပန်းရန်၏3အလင်းအိမ်ကြီး။
၏လိုဂို "Mason ကယ်တင်"
ကျနော်တို့ကဥရောပဧည့်ခံရေးစင်တာများတွင်ရာသီဥတုနှင့်စစ်ဒုက္ခသည်များကြီးထွားလာအရေအတွက်က coordinate ရန်, မော်ရိုကိုနှင့်အတူစပိန်ဆက်သွယ်ထားသောတံတားတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂအပေါ်ကိုခေါ်ပါ။
မော်ရိုကို၌အကြှနျုပျတို့၏ရုံးကတဆင့်ကျနော်တို့က Cabin အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတည်ဆောက်ရန်နှင့်အနုပညာများအတွက်အပိုဆောင်းအာကာသကိုဖန်တီးရန်အဆင်သင့်သင်္ဘောပြန်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ တစ်ဦးကကုသိုလ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီ pixels ကိုကူညီမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုထမ်းငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဂြိုလ်တုအင်တာနက်သည်အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်းထုတ်လွှင့်၏စစ်ဆင်ရေးသေချာပါလိမ့်မယ်။ pixel ကူညီကိုယ်တိုင် Self-ပရိုဂရမ်တိုက်ရိုက်စီး swarm အကူအညီဆော့ဝဲ Interactive မှအကူအညီအားဖွင့်၏ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါစည်သွတ်မုန့်ကိတ်မုန့်အနေဖြင့်ဗီဒီယိုများစင်ပြိုင်ကျနော်တို့မှန်မှန်သင်္ဘောကနေတိုက်ရိုက်လွှကဗီဒီယိုမှတဆင့်ကူးစက်သောနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါလှေန်းကျင်ကသင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 85.000 €စုဆောင်းခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဦးငါးဖမ်းလှေဝယ်မော်ရိုကိုအတွက်တိုးချဲ့နှင့်အတူစတင်ပါ။ ငွေကိုအတူတကွလာမည့် 365 ရက်အတွင်းအဆိုးဆုံးအမှု၌မလာပါဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့မော်ရိုကိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်သွတ်မုန့်ကအရေးပေါ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့။
အဲဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဦးစည်သွတ်မုန့်စက်, တစ်ပင်လယ်ကွန်တိန်နာနှင့်တစ်ဦးIndustrierührgerätလိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့တစ်နေ့လျှင်မျိုးစုံဆိုင်းအတွက်ဖုတ်, မုန့်ဗူးထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်ရေကြောင်းကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ် Freemason ကယ်တင်နှင့်အတူတကွပိုက်ဆံရဖို့ချင်သောယုံကြည်တယ်ဖြစ်ကြသည်။
paypal လှူဒါန်းမှုများ: paypal@PixelHELPER.tv
အကောင့်အမည်: Pixel ကူညီ Foundation မှအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော GmbH သည်
2015 ကတော့ pixel ကူညီမြေထဲပင်လယ်အတွင်း Boojenleger Liberty ရဖို့ပင်လယ်ပြင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကြိုးစားခဲ့
တစ်ဦး Mason အဖွဲ့အစည်းကဖောင်းကြွစာလုံးအဘယ်ကြောင့်
pixel ကူညီခြင်း, Freemasons ၏စံနမူနာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းလူနည်းစုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေန်းကျင်စိတ်တွင်မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, အန္တရာယ်အကြောက်ကင်း, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ, လမ်းလျှောက်ကမ္ဘာကြီး၏ဆူညံသံများကဒါပေမဲ့တွေဝေ။ အခြေခံခံယူချက်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံမူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ "Liberty, တန်းတူရေး, အဖွဲ့များကြားတွင်" နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစျြလြူရှုမှုများအထပ်ထပ်တိုက်လိုအပ်နေပါသည်။ pixel ကူညီ၏ Mason အဖွဲ့ဝင်များကသူ့ဟာသူပြသလေရာရာ၌တက်ကြွစွာတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်, ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ပြန်လာချင်တယ်။ ရာစုနှစ်များစွာအဘို့, Freemasons ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းရန်ကျူးလွန်နှင့်သင့်လုပ်ရပ်တွေကိုနောက်ထပ်ဥပမာဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဆောင်ပုဒ်မှစစ်မှန်သော: ကမ္ဘာအနှံ့အတူတူလူသားတစ်ဦးလွယ်ကိုဆွဲပြီးလျှင်ဖို့ကြိုးစားနေ "ကိုယ်သိပါ" အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။
pixel ကူညီ 2011 သည်အခြား Freemasons အပါအဝင် 70 ပူးပေါင်း, ကျော်နှင့်အတူအလင်းအနုပညာရှင် & Freemasons မှာ Oliver Bienkowski ၏6ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ Freemasonry ချစ်ကြည်ရေးတစ်ခု Ethics oriented Bundeli, ဥရောပဉာဏ်အလင်း၏အစဉ်အလာကနေပျေါထှနျးခဲ့သည့်စတင်အဝန်းနှင့်သင်္ကေတအလုပ်အဖွဲ့ချုပ်၏နှောင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏တန်ဖိုးကိုရာထူးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, ညီအစ်ကိုများ, လွတ်လပ်မှု, တရားမျှတမှု, ငြိမ်းချမ်းရေး, မေတ္တာနှင့်သည်းခံစိတ်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်လုပ်ရပ်များဘို့လမ်းညွှန်မှုနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများပေးအပ်ခြင်းအတူ။
အဆိုပါ Mason ဖက်ဒရယ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစစ်မှန်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ပညာရေးပါပဲ။ ဒီအဆုံးရန်နည်းလမ်းများ, စစ်မှန်တဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ညီအစ်ကိုချစ်ခြင်းအများအတွက်အလယ်ခေတ် Mason '' Guilds သင်္ကေတအကောက်ခွန်, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအပေါ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ညွှန်ကြားချက်သည်စံပြနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စောင့်ရှောက်မှုကနေဝယ်ယူ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း။ လူတိုင်း, box ကိုပြင်ပတွင်ထိုအအခြေခံမူပျံ့နှံ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ပညာရေးမြှင့်တင်ရန်နှင့်သည်းမခံဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ်။ သေတ္တာထဲတွင်, အဖွဲ့ဝင်များသင်္ကေတများနှင့် Self-ပညာရေး၏ရိုးရာဓလေ့များ shared အတှေ့အကွုံအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ အဆိုပါရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားလူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအတှကျအထရပ်နေအားဖြင့်၎င်း, မေတ္တာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် Mason လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏စံနမူနာနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားပါ။
Orlando တွင်လုပ်ကြံခံရ, Dusseldorf ဂျာမဏီ "ဟုအဆိုပါသက်တံ့ မှစ. " သက်တံ့လေဆာတပ်ဆင်
Freimaurer-retten.de - ထွက် လာ. လူဦးကယ်တင်! ဆေးရုံသင်္ဘော ဇူလိုင်လ 19th, 2019အိုလီဗာ Bienkowski